I-croutons yegalikhi engenasimahla -Iiresiphi zeThermomix | ThermoRecipes
I-garlic croutons engenalo i-Gluten
IisobhoImizuzu ye196 abantuIikhalori ezingama-140
por UMayra Fernandez Joglar
Ezi Gluten simahla yeGarlic Croutons zezona zitya ezisecaleni zokunika Umnxeba we-crunch kunye nokudibanisa ukunambitheka kuzo zonke izitya zakho.
Eyona nto intle malunga nezi croutons kukuba zenziwe kunye nazo umgubo weamangile kwaye i-gluten-free, ngoko iresiphi yile zilungele ii-celiacs kunye ne-gluten enganyamezelaniyo.
Ukongeza, ezi croutons zibonelela ngento eqhwethayo nenencasa egalikhi, ebenza bagqibelele kungekuphela ii-gazpachos kunye neesuphu ezibandayo ikwalungiselela iisaladi.
1 I-garlic croutons engenalo i-Gluten
2 Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-croutons yegalikhi engenasimahla?
Ngezi croutons okanye iitoni, uya kuba nakho ukunika izitya zakho inqaku elixineneyo.
Uhlobo lweRipeipe: isuphu
Ixesha lokulungiselela: 18M
Ixesha elipheleleyo: 19M
I-35 g yomgubo weamangile (Jonga iresiphi)
30 g yeoyile ye-oliva enyulu
1 icephe (ubungakanani be dessert) umgubo wokubhaka (Jonga iresiphi)
1 icephe (ubungakanani obuntsundu) umgubo wegalikhi
30 g ibhotolo, inyibilikile (Jonga iresiphi)
Sitshisa i-oveni ukuya kwi-180º ngobushushu phezulu nangaphantsi.
Sibeka zonke izithako kwiglasi ngaphandle kwebhotolo yegalikhi. Sibetha ngexesha Imizuzwana eyi-30, isantya 2.
Thela intlama kwisitya esine-12 x 12 cm sikwere microwave ngaphandle kokuthambisa.
Sifaka kwi-microwave imizuzu emi-2 okanye emi-3 kubushushu obuphezulu. Kwimeko yam ithathe imizuzu emi-3 nangona izakuxhomekeka kwimicrowave.
Sijonga ukuba iphekwe kakuhle na kwaye ukuba sibona ukuba iziko lisekrwada, songeza ukupheka eminye imizuzwana engama-30. Susa kwaye uyeke ukupholisa imizuzu embalwa.
Sithatha ithuba lokubeka ibhotolo yegalikhi kwisitya esikhulu kwaye unyibilike ibhotolo yegalikhi imizuzwana embalwa.
Asidibanisi kwaye sisike kwisiqingatha sokwenza iipleyiti ezimbini. Emva koko, siyinqumle ibe yimichilo kwaye emva koko umtya ngamnye kwizikwere ukwenza ii-croutons.
Songeza iziqwenga kwisitya apho sinebhotolo enyibilikileyo kwaye siyishukumisa ukuze zonke zifakwe kakuhle.
Kwelinye icala, sibeka i-tray ngephepha lokubhaka kwaye sibeke i-croutons, siqinisekisa ukuba bahlukile omnye komnye.
Sizifaka kwi-oveni imizuzu eli-15 kubushushu obufanayo, sijonga yonke imizuzu emi-5 ukuze zingatshi kwaye zithathe ithuba lokuziguqula kwaye ziyigolide macala onke.
Susa kwi-oven, vumela ukupholisa imizuzu embalwa kwaye ulungele ukukhonza.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-croutons yegalikhi engenasimahla?
Le recipe inayo Iinxalenye ezi-2: Kwelinye icala, siya kwenza uhlobo lwesonka ngomgubo weamangile. Kwaye, kwelinye, simdaka amathoni ngebhotolo yegalikhi eya kuthi ibanike incasa engakholelekiyo.
Kwinxalenye yokuqala, uya kuyidinga umgubo weamangile nangona ungenayo, awunakukhathazeka kuba ingenziwa ngalo mzuzu ukugaya iiamangile okwemizuzu embalwa.
Kwinxalenye yesibini, udinga ibhotolo yegalikhi. Ndikucebisa ukuba ube nayo yenziwe kwangaphambili ukuze isebenze ngakumbi kwaye ikhawuleze kuwe ukwenza iresiphi.
Phambi kokuba ndishicilele le recipe ndenze iimvavanyo ezininzi ukuze ndifumane iresiphi eyimpumelelo. Apha ngezantsi unokufumana izichazi zam nge ezinye iindlela oko kuya kukunceda ngokuqinisekileyo:
El ioli yeoli Inokufakwa endaweni yeoyile yekhokhonathi kodwa, ngokobuqu, ndiyayithanda ukhetho lokuqala olungcono kuba isisithako esinaso ekhaya kwaye siyinika incasa engaphezulu yeMeditera.
Umnxeba wokugqibela wenziwe nge iziko ukumdaka ngebala iicroutons kwaye uzenze zi crisp Unokwenza umsebenzi we fan kodwa kuya kufuneka ulumke kuba emva koko banombala omdaka ngaphambili kwaye, ukuba ulahlekile, banokutsha.
Ndizamile nokuzenza mdaka kwipani yokutshiza kodwa andiphumelelanga kwiziphumo ezifanayo kuba azikho krwada.
Into endishiyekileyo kukuzama a Ifreyimu yomoya. Ukuba ufuna ukuzama, ungasishiya nezimvo zakho ngamava akho.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iresiphi esisiseko: umgubo weamangile / Iisuphu ezi-9 ezibandayo zokubetha ubushushu behlobo / Isaladi kaKesare
Lungisa le recipe kwimodeli yakho yeThermomix
Fumanisa ezinye iiresiphi ze: Celiac, Iisobho kunye namafutha
Umendo opheleleyo kwinqaku: Thermorecetas » Iiresiphi ezikhethekileyo » Celiac » I-garlic croutons engenalo i-Gluten
Squids kwiAmerican Salsa